DOORASHOOYINKA DALKA KENYA.
Fahad Yaasiin | SomaliTalk Kenya
Kenya Election: Latest News -- English Version
Dalka kenya ayey doorashoonkiisi Madaxti-nimada, Barlamaanka, iyo Dowlada hoose, ka bilowdeen maanta, Muwaadininta ayaa si toos ah ugu dhaqaqay saakay sidii ay codad-kooda uga dhiiban lahaayeen goobaha loogu talagay cod bixinta.
Axsaabta ugu muhimsan dalka ayaa ah kuwa ay kala hogaaminayaan, Uhuru Kenyata, oo ah wiil u dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Kenya. Iyo Moy Kibiki, oo ah Ruug-caddaa Siyaasi ah, xilal kala duwanna ka soo qabtay dalka Kenya. Shacabka reer Kenya waa ay u kala qaybsan yihiin Axsaabta ay hogaaminayaan labadan hogaamiye ee isku Beesha ka soo wada jeeda. Waxaanan la saadaalin Karin hadda Xisbiga jagada ku guuleysan doonaa, maxaa yeelay labada xisbiba makala dhacaan xagga taageerada, waxaase arintaa ay kala bixi doontaa galabta marka uu gabalku dhaco.
Bulshada reer Kenya ayaa ah dad dhisan oo aad u fahamsan Dimuqraadiyada, waxaase la saadaalin Karin sida ay noqon karto nabad galyada maalmaha inagu soo aadan, iyadoo laga tuhun qabo in ay dadka qaar arbushaad sameeyaan, Booliska keynase waxa ay heegan aan noocisoo kale la’arag u galeen sidii ay usugu lahaayeen nabadgalyada dalka. Taliyaa Ciidanka Booliska ayaa cadeeyey in aan la ogolaan doonin isu soobax ka danbeeya maalinta doorashada, taas oo dadka niyada u dajisay, waxaad magaalada Neyrobi ku arkeysaa Ciidanka Booliska oo si raxan raxan leh ugu gaafwareegaya magaalada.
FAHAD YAASIN XAAJI DAAHIR
Madaxa gudiga doorashooyinka Mr Samuel Kivitu ayaa ugu baaqay dhamaan dadwaynaha codkooda dhiibanaya in ay xaqiijiyaan sidii bari ay ugu dareeri lahaayeen goobaha sanduuqyada codbixita iyo in... GUJI... 26/12